Maleeshiyo Weerartay Xabsi Ku Yaalla Dalka Kongo Oo Sii Daysay 900 Oo Maxbuus. - Wargane News
Home Somali News Maleeshiyo Weerartay Xabsi Ku Yaalla Dalka Kongo Oo Sii Daysay 900 Oo...
Maleeshiyo Weerartay Xabsi Ku Yaalla Dalka Kongo Oo Sii Daysay 900 Oo Maxbuus.
11 qof ayaa la dilay kadib markii maleeshiyo ay weerartay xabsi ku yaalla dalka Jamhuuriyadda Dimuqaraadiga ah ee Kongo, waxayna xabsiga ka sii daayeen in ka badan 900 oo maxbuus, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi.
Guddoomiyaha gobolka Kivu ayaa sheegay in maleeshiyadu ay adeegsadeen hub aad u culus oo ay ku jabiyeen xabsiga oo ku yaala magaalada Beni.
Ugu yaraan 8 ka mid ah dadka dhintay waxay ahayeen askartii ilaalinaysay xabsiga.
Bandhow ayaa lagu soo rogay magaalada.
Weli ma cadda cidda ay yihiin malayshiyada weerarka soo qaaday.
Nin u ololeeya xuquuqa aadanaha oo la yiraahdo Teddy Kataliko ayaa sheegay in inta badan maleeshiyadda ka dagaalanta gobolkaasi ay yihiin kuwa doonaya in ay iskood isku difaacaan oo loogu yeero Mai Mai.
Dalka Demoqaraadiga Congo, mushkilo ayaa ka taagnayd tan iyo markii madaxweyne Kabila uu diiday in uu xilka ka dego, kadib markii uu wakhtigiisii dhamaaday sannadkii tagay.
Dhacda ka dhacday Beni waxay ugu dambaysay dhacdooyin xiriir ahaa oo lagu bartilmaamaydsanayey xabsiyada afartii bilood ee la soo dhaafay.
Bishii la soo dhaafay, afar kun oo maxbuus ayaa ka baxsaday xabsi si aad ah loo ilaalinayey oo ku yaala caasimada Kinshasa kadib weerar ay soo qaaday koox gooni goosad doonaysa.